Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan tirtiro Files
Haddii aad rabto in aad iibiso telefoonka aad Android ama aad rabto in aad ka soo siiyo, waxaa lagama maarmaan ah in aad masixi card SD aad. Read More >>
In this article aan eegno qaar ka mid ah codsiyada antivirus ugu fiican ee ka shaqeeya shaqo fiican ayuuna u android dadka isticmaala telefoonka. Read More >>
Arrinta ah xogta u korayo mahad muhiim ay kor u kaceen tirada dambiilayaasha internetka in ay isku dubaridi xubno xogta muhiimka ah si ay u fuliyaan weeraro. Read More >>
Habka koowaad waa ay warshad resetting telefoonka aad Android iyo Habka labaad waa iyada oo la isticmaalayo Wondershare MobileTrans. Read More >>
Waxaad u malayn kartaa in warshad resetting kiniinkii Android tirtiri doonaa, oo masixi dhammaan macluumaadka shakhsiyeed, laakiin ma aha sidaas. Xogta ku qoysay oo tirtirayaa inteeda kale warshad la soo celin karin oo la isticmaalayo heli som Read More >>
Telefoonada Smart waa sida kombiyuutaro iyo waxay u baahan yihiin in la dhowro waqti ka waqti. Dabcan dayactirka weeyaan hardware iyo software nidaamyada oo dhan loogu talagalay in lagu helo si kor loogu qaado nolosha ka mid ah Read More >>
Waxaad sidoo kale u helida telefoonka isticmaalaya barnaamijyadooda ama aan barnaamijyadooda. Iyada oo aan la isticmaalayo barnaamijyadooda raadraaca waxaad isticmaali kartaa maamulaha Google ee Android qalab (TV), Google Map Goobta Taariikhda iyo Google AirDroid. In arti this Read More >>
Maanta, waxaan ku tusi doonaa sida loo fariimaha qoraalka ah oo dhan gurmad oo ay helaan iyaga mar kasta oo aad rabto, in aad kombuutarka. Read More >>
waxaa jira barnaamijyo kale oo kaa caawinaya in aad u qabtaan hawsha iyo xitaa aad nadiifin kartaa xogta barnaamijyadooda 'ka gudahood ah iPhone ee interface laftiisa, sida ugu wanaagsan ee aad u heli karto samaysay waa la isticmaalayo SafeEraser Wondershare. Read More >>
Tani waxay noqon karaan kuwo khatar ah iyo sidoo kale iyada oo suurtagal ah musuqmaasuq. Si aad xog Autofill aad on your iPhone, raac tallaabooyinka hoos ku qoran. Read More >>
Ma is weydiisay sida loo joogto ah tirtirto heeso ka iPhone? Ha welwelin. Ka dib markii ay talaabooyin fudud hoos ku qoran, waa hubaal, aad ka saari doonaa heeso rabin ka iPhone gabi ahaanba. Read More >>
Si loo badbaadiyo naftaada dhibaato, waxaa lagu talinayaa in aad tirtirto xogta aad ka iPhone oo dhan ka hor inta iibka ah ee model ugu dambeeyay Read More >>
1. Mobile Touch Screen 2. gargaaraha Phone Mobile 3. Xagashada Screen Mobile 4. Case Phone Mobile 5. Mobile Phone Screen Xagashada ka Inside Read More >>
Maqaalka aad muujinaysaa laba siyaabood in ay tirtirto fariimaha qoraalka telefoonka Android. Akhri oo dooran sida ugu wanaagsan ee ay sameeyaan Kabcada_ SMS Android. Read More >>
malwares si fiican u qoran tahay badan inta ay weerari karaan iyo idlaan aad antivirus, gaar ahaan haddii aan la updated Read More >>